डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘कसले भन्छ म देखि टाढा छिन् उनी, हरपल आउने ति यादमा गाढा छिन् उनी…’ सार्वजनिक – Complete Nepali News Portal
डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘कसले भन्छ म देखि टाढा छिन् उनी, हरपल आउने ति यादमा गाढा छिन् उनी…’ सार्वजनिक
डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘कसले भन्छ म देखि टाढा छिन् उनी, हरपल आउने ति यादमा गाढा छिन् उनी…’ सार्वजनिक भएको छ । सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर तथा सङ्गीत र देवेन्द्र नेवाको एरेञ्ज रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
प्रसन्नले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा अनु शाह, डा. डीआर र सागरलाई फिचरिङ गरिएको छ । विदुर पाण्डेको छायाँकन रहेको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका हुन् ।
डी. आर उपाध्यायका ‘प्रणय’ ‘जखम’, ‘माउन्टेन मेलोडी’, ‘नसालु नजर’, ‘जोहो’, ‘अन्तराप’, ‘प्रतिनाद’, ‘सहेली’, ‘परिष्कृत’, ‘कृति’ र ‘पृथक’ जस्ता गीति एल्बम स्रोता/दर्शकमाझ आएका छन् । त्यस्तै उनका ‘अतिरिक्त’, ‘भाग्यचक्र’, ‘स्वार्थी’, ‘त्यागी’, ‘बज्रघात’, ‘अपवित्र छायाँ’, ‘बिटुली’ ‘दगाबाज’ र ‘अधुरो प्रेम’ जस्ता उपन्यास पाठकमाझ आएका छन् ।